Why or How ? ~ The Light of Truth
Friday, March 02, 2012 The Light Of Truth No comments
မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် နှုတ်ကပတ်တော်အသစ်တွေ တင်မပေးဖြစ်တာ အတော့်ကိုကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ လေ့လာသွားကြမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ Why or How လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ … ကျနော်တို့ ယုံကြည်သူတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် အဓိကအုပ်စု (၂)မျိုး ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အုပ်စု(၂)မျိုးကို ဘယ်လိုခွဲသလဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံကြရတဲ့ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေအားဖြင့် ခွဲခြမ်းကြည့်တာပါ။ အဲဒီလို အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေအပေါ်မှာ အုပ်စုခွဲတာဆိုလို့ အခက်အခဲအကြီးအသေး၊ ပြဿနာအကြီးအသေးအပေါ်မှာ ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ပြဿနာကင်းတဲ့သူ၊ အခက်အခဲမကြုံဖူးတဲ့သူရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဆင်းရဲသားလည်း ဆင်းရဲသားလောက် ပြဿနာအခက်အခဲရှိသလို သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးကြီးလည်း သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးကြီးလောက် ပြဿနာအခက်အခဲရှိကြတာပါပဲ။ ကျားကြီးရင် ခြေရာကြီးတာ လောကဓမ္မတာပါပဲ။
သမ္မာကျမ်းစာကလည်း ကျနော်တို့ကို ပြဿနာအခက်အခဲကင်းဝေးပြီး နေနိုင်လိမ့်မည်လို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မက်လုံးပေးမထားပါဘူး။ သခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်တော်ကနေကို လောကမှာနေစဉ်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရ မယ်လို့ အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ (မဿဲ ၁၆း ၃၃) ကျနော်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကျေးဇူးတော်က အဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခထဲ ကနေ အောင်မြင်ခြင်းအခွင့် ပါပဲ။ ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာအောင် ပြောရရင်တော့ တိုက်ပွဲမရှိဘဲ အောင်ပွဲဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်သလို စစ်သူရဲကောင်းဆိုတာလည်း ပေါ်ပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ကို တိုက်ပွဲနဲ့ ပေးတွေ့ပေမယ့် အောင်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားပါ။ တစ်ကြိမ်တခါမျှ ပြိုင်ပွဲမ၀င်ဖူးဘဲ ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့သူ ရယ်လို့ လောကမှာ မရှိပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင်လည်း ချန်ပီယံရူး ရူးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်က တစ်စုံတရာကို အခြောက်တိုက်စွဲလန်းပြီး ရူးနှမ်းနှမ်းခရစ်ယာန် မဖြစ်စေချင်တာ အမှန်ပါ။
လူ့လောကမှာ အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ကျနော်တို့တွေ နိစ္စဓူဝ တွေ့ကြုံရမယ့် ပြဿနာ၊ အခက်အခဲတွေ၊ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတွေကို ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှပဲဖြစ်ရမယ်လို့ ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျနော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် လူပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ရဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေ၊ မချေမငံခြင်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့တွေဘက်က စင်းလုံးချောဖြစ်အောင် ပြဋ္ဌာန်းထားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ကျနော်တို့မှာရှိတဲ့ အခွင့်အရေး/ လုပ်ပိုင်ခွင့်က - အဲဒီအရာတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါပဲ။ ကျနော်တို့ဘက်က ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ အဲဒီတုံ့ပြန်မှုတွေအားဖြင့် အဓိကအုပ်စု (၂)စုကို ခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီအုပ်စုကြီး(၂)စုရဲ့ ခေါင်သူကြီးဖြစ်တဲ့ ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဖတ်ရှုဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဖို့ကတော့ WHY ဆိုတဲ့အုပ်စုပါ။ ဒီအုပ်စုဝင်တွေက ဘာကြောင့်လဲ ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဒီလောက်ကြိုးစားခဲ့တာတောင် …. ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ စောဒကတက်မှု၊ မကြေမချမ်းဖြစ်မှု၊ အထွန့်တက်မှုတွေနဲ့ ယဉ်ပါးပြီး အသားကျနေတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ကွက်လပ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်ချက်တစ်ခု၊ ပြစ်ချက်တစ်ခုကို တွေ့တဲ့အခါ ဘာကြောင့်လဲ လို့ တွေးပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထောက်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ သူဋ္ဌေးကြီးယောဘ ဖြစ်ပါတယ်။
ယောဘရဲ့ မေးခွန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
ငါသည် မွေးစက အဘယ့်ကြောင့် မသေသနည်း။ အမိဝမ်းထဲမှ ထွက်စက အဘယ့်ကြောင့်အသက် မချုပ်သနည်း။ ယောဘ ၃း ၁၁
Why did the knees prevent me? Or why the breasts that I should suck? Job 3:12
ငါ့ကို အဘယ့်ကြောင့် ပိုက်ပွေ့ရသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် နို့တိုက်ရသနည်း။ ယောဘ ၃း ၁၂
Why is light given toaman whose way is hide, and whom God hath hedged in? J0b 3:23
မိမိသွားသောလမ်း ကွယ်ပျောက်သောသူ ဘုရားသခင် ဆီးကာချုပ်ထားသောသူအား အလင်းနှင့်အသက်ကို အဘယ့်ကြောင့်ပေးသနည်း။ ယောဘ ၃း ၂၃
ယောဘရဲ့ ပထမဆုံးမေးခွန်းကို ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားနဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့် ရအောင်ဗျာ။ ဘုရားသခင်ကို ယောဘပထမဆုံးမေးခွန်းထုတ်ထားတာကို ကြည့်တဲ့အခါ -
ငါသည် မွေးစက အဘယ့်ကြောင့် မသေသနည်း။ အမိဝမ်းထဲမှ ထွက်စက အဘယ့်ကြောင့် အသက် မချုပ်သနည်း။ (ယောဘ ၃း ၁၁) လို့ မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။
စာငှက်နှစ်ကောင်ကို အဿရိတစ်ပြားအဖိုးနှင့် ၀ယ်ရသည်မဟုတ်လော။ သင်တို့အဘအခွင့်မရှိလျှင် ထိုစာငှက်တစ်ကောင်မျှ မြေသို့မကျရ။ မဿဲ ၁၀း၂၉
ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်တာကို ဘုရားသခင်က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်သလို မတော်တဆဖြစ်ပေါ် လာတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းတိုင်းဟာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု (Mission တစ်ခုအတွက် လို့ ပြောရင် ပိုလေးနက်ပါလိမ့်မယ်)အတွက် တိကျသေသပ်တဲ့လက်ရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ လုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းဆိုရင် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက်ပါ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ အပြည့်အစုံရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဘုရားသခင်က ပရောဖက်ယေရမိကိုဘယ်လို ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်ဗျာ။
သင့်ကို အမိဝမ်းထဲ၌ ငါမဖန်ဆင်းမီ သင့်ကိုငါသိပြီ။ မဖွားမီကပင် သင့်ကိုငါ သန့်ရှင်းစေ၍ လူအမျိုးမျိုးတို့ အဖို့ ပရောဖက်အရာ၌ ခန့်ထားပြီ … ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယေရမိ ၁း ၅
တကယ်တော့ ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာ တိုက်ပွဲကြားမှာ အောင်ပွဲတွေ အဆင့်ဆင့်ရဖို့အတွက် ဖန်ဆင်းခြင်း ခံထားရတဲ့အသက်တာပါ။ တိုက်ပွဲနဲ့ကြုံလာတာနဲ့ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ … ဘာကြောင့် … ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထုတ်နေဖို့ ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ပြဿနာတစ်ရပ်အပေါ် တုံ့ပြန်ပုံ၊ တုံ့ပြန်နည်းကို အဓိကထားပြီး ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
တကယ်တော့ခွက်ကတစ်ခွက်တည်းပါ။ ဒါပေမယ့် မြင်ပုံမြင်နည်း(၂)ခုကို ယှဉ်ပြီးပြချင်တာကြောင့် (၂)ပုံပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမြင်နေရတဲ့ ရေတစ်ခွက်ရှိနေတဲ့ခွက်ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ အဓိကအားဖြင့် အမြင်(၂)မျိုး ကွဲပြားနေပါတယ်။ ပထမအမြင်က - တ၀က်လွတ်နေတယ် ဆိုတဲ့အမြင်ပါ။ အဲဒီလိုမြင်တတ်သူတွေရဲ့ တွေးပုံက ဘာကြောင့် တ၀က်ပဲရှိနေရတာလဲ။ ဘာကြောင့် တ၀က်လွတ်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့ လစ်လပ်မှု၊ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ အခြေပြုတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဋ္ဌေးကြီးယောဘက အဲဒီအုပ်စုဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ … ကောင်းပြီ။ နောက်ထပ်အုပ်စု တစ်ခုကို ကျနော်တို့တွေ ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
သမ္မာကျမ်းစာ(၆၆)စောင်မှာ ယောဘ၀တ္ထုပြီးတာနဲ့ သူ့နောက်မှာ ကပ်လျက်ရှိနေတာက ဆာလံ ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆာလံကျမ်းကို ရေးသားတဲ့ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာကို လေ့လာကြည့်ရင် သူခံခဲ့ရတဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကလည်း တကယ့်ကို မနည်းမနောဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲကလည်း ယောဘထက် မလျော့နိုင်ပါဘူး။ ယောဘလိုသူဋ္ဌေးတစ်ယောက်အတွက် သူ့ရဲ့ချက်ကောင်း တနည်းအားဖြင့် ပျော့ကွက်ဟာ စည်းစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့ ချက်ကောင်း တနည်းအားဖြင့် ပျော့ကွက်ကတော့ ရာဇပုလ္လင်ဆိုတဲ့ ရှင်ဘုရင်အရိုက်အရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ကျားကြီးရင် ခြေရာကြီးဆို သလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အားကိုးအားထားအပြုဆုံးသောအနှစ်သာရတွေအပေါ်မှာ စုံစမ်းခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ သူဋ္ဌေးကြီးယောဘ စည်းစိမ်ပြုတ်သလို ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်လည်း အာဏာသိမ်းခံရပြီး နန်းတော်ကနေ တိမ်းရှောင်ရတဲ့ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူဋ္ဌေးကြီးယောဘ သားသမီးတွေဆုံးပါးသလို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးလည်း သားဆုံးဖူးတဲ့အပြင် သားကပြန်ပြီး ရန်ရှာပုန်ကန်တာကိုလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဝဒ်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာမှာ အခက်အခဲဆုံးအချိန်လို့ပြောနိုင်တဲ့ သားဖြစ်သူ အဗရှလုံရဲ့ပုန်ကန်ခြင်းကို ခံရတဲ့အခြေအနေမှာ သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ။
LORD, how are they increased that trouble me! Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Psalms 3:1-2
အို ထာဝရဘုရား အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည် အလွန်တိုးပွား၍ အကျွန်ုပ်တဘက်၌ထသောသူတို့သည် များကြပါ၏။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍ ချမ်းသာမရဟု အကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍ ပြောသောသူအများ ရှိကြပါ၏။ ဆာလံ ၃း ၁-၂
ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေက တကယ့်ကို လူတကာပြောစမှတ်ဖြစ်လောက်အောင် ဆိုးဝါးလှတဲ့အခြေအနေပါ။ နေ့လားညလား … အချိန်မရွေးအသက်သေနိုင်တဲ့အခြေအနေအပြင် ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးမယ့်ရန်သူက တခြားသူမဟုတ်ဘဲ သားအရင်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးလှပါတဲ့ဆိုတဲ့သူ အခုတော့ ချမ်းသာမရပါလားလို့ လူတွေကတောင် ပြောကုန်ကြပြီလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက အခြေအနေမှန်ကို သူရဲဘောကြောင်စွာ မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာဘဲ သတ္တိရှိစွာ ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေဆိုက်နေချိန်မှာ သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကို ကြည့်ရအောင် ။
သို့သော်လည်း အို ထာဝရဘုရား ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ ဖြစ်တော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်၏ ဘုန်းလည်းဖြစ်တော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်၏ဦးခေါင်းကို ချီကြွသောသူလည်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ဆာလံ ၃း၃
I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about. Psalms 3: 5-6
ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို မစတော်မူသောကြောင့် ငါသည် အိပ်၍ပျော်ခြင်းအခွင့်နှင့် နိုးခြင်းအခွင့်ရှိ၏။ ငါ့ကို ရန်ဘက်ပြု၍ ၀န်းရံသောသူအထောင်အသောင်းကို ငါမကြောက်ဘဲနေမည်။ ဆာလံ ၃း ၅-၆
ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာ ခက်ခဲဆိုးယုတ်လှတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကို မျှော်လင့်လျှက် အသက်ရှင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ဘေးကြုံနေရချိန်မှာ ဘုရားသခင် ဘယ်လို(How)စီရင်မလဲ ဆိုတာကို မျှော်လင့်တဲ့သူ၊ ဘုရားရဲ့လက်တော်ကို ၀န်ခံသောသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့ ဆာလံသီချင်းတွေကို ကြည့်ရင် ဘုရားသခင်ဘယ်လိုကြီးမြတ်တယ်၊ လက်တော်က ဘယ်လိုပို့ဆောင်တယ် ဆိုတာတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာ မြင်နေရတဲ့ပြဿနာအပေါ်မှာ အာရုံပြုပြီး WHY မေးခွန်းထုတ်ပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ သူမဟုတ်ပါဘူး။ မမြင်ရတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်က HOW ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို မျှော်လင့်လျှက် ၀န်ခံသောသူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာက အခက်အခဲပြဿနာကို စောဒကတက်လိုက်၊
ခေါင်းခြောက်လိုက်နဲ့ မေးခွန်းပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဗျာများနေတဲ့ယောဘလို ယုံကြည်သူတွေကိုလည်း ဘုရားသခင်က ပစ်ပယ်မထားဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ပြေလည်ခွင့်ကို ရသည့်တိုင် မပြေလည်သေးခင်စပ်ကြားမှာတော့ WHY နဲ့ HOW ရဲ့ ခံစားမှုက ဘယ်လိုကွာခြားပြီး WHY သမားခမျာ ပြဿနာကြားမှာ ဘယ်လိုအသက်ငင်နေရတယ် ဆိုတာကို ဒီပုံလေးမှာ အဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
King David *Full Movie* ဒါဝိဒ်မင်းကြီး
Esther *Full Movie* ဧသတာဝတ္ထု
Paul the Apostle Full Movie* တမန်တော်ပေါလု
Jeremiah the Prophet *Full Movie* ပရောဖက်ယေရမိ
နှလုံးသားဆုတောင်း (Myanmar Worship Song)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း (The Book of Genesis *full movie*)
ရှောလမုန်မင်းကြီး ( King Solomon *Full Movie)